Warka - Wajiyadda ma loo ilaaliyaa dadka xidhan ama dadka ku hareeraysan?
“Waxaan u maleynayaa inay jiraan cadeymo ku filan oo sheegaya in faa iidada ugu fiican ay tahay dadka qaba COVID-19 inay ka ilaaliso inay siiyaan dadka kale COVID-19, laakiin wali waxaad ka heleysaa faa iidada maaskarada xirashada haddii aadan sameyn ' t ha haysato COVID-19, ”ayuu yidhi Chin-Hong.
Maaskarada ayaa laga yaabaa inay waxtar badan tahay "isha lagu xakameeyo" maxaa yeelay waxay ka hortagi karaan dhibcaha waaweyn ee la eryay inay uumi baxaan dhibco yaryar oo ka sii fogaan kara.
Arrin kale oo ah in la xusuusto, ayuu xusay Rutherford, waa inaad weli ku qaadi karto fayraska xuubka indhahaaga ku jira, khatarta ah in wejiga duubku uusan baabi'in.
Nooca maaskarada ma khusaysaa?
Daraasaduhu waxay isbarbar dhigeen walxaha maaskaro kala duwan, laakiin guud ahaan dadweynaha, tixgelinta ugu muhiimsan waxay noqon kartaa raaxo. Maaskarada ugu fiican ayaa ah mid aad si raaxo leh oo joogto ah u xidhan karto, ayuu yidhi Chin-Hong. Niraajiyeyaasha N95 waxay kaliya lagama maarmaan u yihiin xaaladaha caafimaad sida soo-gelitaanka. Maaskarada qalliinka guud ahaan way ka difaac badan yihiin maaskarada dharka, dadka qaarna waxay u arkaan inay ka fudud yihiin oo ay ku raaxaystaan ​​inay xidhaan.
Guntii iyo gunaanadkii waa maaskarad kasta oo daboosha sanka iyo afka inay waxtar yeelanayso.
"Fikradda ayaa ah yareynta halista halkii laga hortagi lahaa gebi ahaanba," ayay tiri Chin-Hong. “Ma tuuri doontid gacmahaaga haddii aad u malaynayso in maaskarada aysan boqolkiiba boqol waxtar lahayn. Taasi waa doqonimo. Qofna ma qaato dawada kolestaroolka maxaa yeelay waxay ka hortagi doonaan wadna qabadka boqolkiiba boqol waqtiga, laakiin waxaad yareysaa halistaada si weyn. ”
Si kastaba ha noqotee, labadaba Rutherford iyo Chin-Hong waxay ka digeen waji-furka N95 ee leh walxaha (badanaa loo isticmaalo dhismaha si looga hortago neefsashada boodhka) sababtoo ah ma ilaalinayaan kuwa hareerahaaga ah. Fiilooyinkaan hal-dhinac ah ayaa xirmaya marka qofka xiran uu neefsanayo, laakiin wuxuu furaa marka uu xirto qofka xiran, taasoo u oggolaaneysa hawo aan la sifeynin iyo dhibco inay ka baxsadaan. Chin-Hong waxay sheegtay in qof kasta oo xidhan maaskaro waalka loo baahan yahay inuu ku xidho qalliin ama maaskaro maro dushiisa. "Haddii kale, kaliya xiro maaskaro aan walxaha lagu xirin," ayuu yiri.
San Francisco waxay qeexday in waji-furka leh filtarka aysan u hoggaansamin amarka daboolaya wajiga magaalada.
Waqtiga boostada: Abriil-27-2021
Alaabada Kulul - Khariidadda bogga - AMP Mobile 3 Lakab Maaskaro La Tuuri Karo Iyadoo Fda, 3ply Maqaalka Wajiga Qalliinka, Heerka 3 Maaskarada Qalliinka, Maaskaro Ffp3, 3 Maaskarada Wajiga ee Fly Non-xidhkii, 3ply Maaskaro Maaskaro Waji ah,